कृष्णबहादुर बस्नेतले ३० वर्षको अवधिमा १० करोड ५६ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी आर्जन गरेको भेटिएको? | कृष्णबहादुर बस्नेतले ३० वर्षको अवधिमा १० करोड ५६ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी आर्जन गरेको भेटिएको? – हिपमत
कृष्णबहादुर बस्नेतले ३० वर्षको अवधिमा १० करोड ५६ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी आर्जन गरेको भेटिएको?
तातोपानी भन्सारका निवर्तमान प्रमुख कृष्णबहादुर बस्नेतले ३० वर्षको अवधिमा १० करोड ५६ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी आर्जन गरेको भेटिएको छ । उक्त अवधिमा तलबभत्ता र अन्य सुविधाबापत उनले प्राप्त गरेको रकम ५१ लाखमात्रै हो ।
आम्दानी र खर्चको अनुपात गणना गर्दा करिब ३५ लाख रुपैयाँ बचत गरेका उनले छोराछोरी पढाउन मात्रै झन्डै ८७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । ०४५ मंसिर २९ देखि लेखापाल भएका उनले आफ्नो आर्जनलाई वैध बनाउनकै लागि ०४४ फागुन १६ देखि जागिर खाएको दाबी गरेका थिए । ०५४ असोज ८ गते शाखा अधिकृत र ०६७ वैशाख ३ गतेदेखि उपसचिव भएका उनले त्यस अवधिमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न विभाग, भन्सार, राजस्व र कर कार्यालयमा काम गरेका थिए । बस्नेतले विराटनगर भन्सारमा काम गर्दा लिएको ‘घूस’ संखुवासभाको खाँदबारीमा बस्ने जेठान नवीनकुमार गौलीको खातामा जम्मा गरेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ । ‘गैरकानुनी आर्जनका उजुरीमा छानबिन गर्दा पैसा अन्यत्र लुकाएकाले शंकास्पद व्यक्तिको खातामा नभेटिने प्रवृत्ति थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘उपसचिव बस्नेतको पनि त्यस्तै भेटिएको छ ।’
आफ्नो आय वैध बनाउन उनले छोरी कृष्टिनाको कमाइ पनि आफ्नै भनी जोडेका थिए । छोरीले रोड सो कन्स्ट्रक्सनबाट ३ लाख ३६ हजार र सीई कन्स्ट्रक्सनबाट ३ लाख ८५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक बुझेको खुलेको छ । बस्नेतले सीईका शम्भु फुयालसँग पनि कारोबार गरेको भेटिएको छ । बस्नेतले विराटनगरमा दुईवटा र काठमाडौंमा पनि घर बनाएका थिए । श्रीमती सविता गौलीको नाममा उनले मोरङको विराटनगर नगरपालिकामा बनाएको घर ०६४ माघ २७ गते ५० लाखमा बेचेका थिए । उनले आफ्नी काकी कृष्णकुमारी बस्नेतको नाममा संयुक्त जग्गा किनेका थिए । त्यो जग्गा ०६९ भदौ ५ मा बेचे । जग्गा बेचेर त्यतिबेला उनले ५६ लाख आर्जन गरेका थिए । ५६ लाखमध्ये ६ लाख ४२ हजारको स्रोत खुलेको थिएन ।
आम्दानीको स्रोत देखाउन उपसचिव बस्नेतले विभिन्न ठाउँबाट ऋण लिएको दाबी गरेका थिए । उनले आफू ४७ लाख ५९ हजार रुपैयाँ ऋणमा भएको दाबी गरे पनि छानबिन हुँदा २४ लाख १७ हजार रुपैयाँ मात्रै यथार्थ ऋण भेटियो । अख्तियारको आरोपपत्रअनुसार ‘आफ्नै खातामा पर्याप्त बचत भएको अवस्थामा सापटी लिएको भनी गरिएको दाबी पत्यारिलो थिएन । उनले आफ्नो दाबीलाई प्रमाणबाट पुष्टि गर्न सकेनन् ।’
भन्सारबाट धमाधम घूस लिने गरेका उनले त्यसलाई वैध देखाउन ‘घरभाडाको आम्दानी’ भनी झूटो बयान दिएका थिए । त्यतिमात्रै होइन, उनले पत्नी सविताको नाममा रहेको काठमाडौंको घरबाट ०६६ देखि तीन वर्ष र ०७२ सालदेखि दुई वर्ष भाडा पाएको दाबी गरेका थिए । उनले भाडाबापत ४० लाख ४० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको दाबी गरे र ५ प्रतिशतले हुने ८० हजार रुपैयाँ महानगरपालिकामा बहाल कर तिरेको बताए । तर त्यसमा पनि छलछाम भएको खुल्यो । अख्तियारले स्थलगत छानबिन गर्न पत्र काटेपछि महानगरीय प्रहरी वृत्त महराजगन्जले स्थलगत सर्जमिन गर्दा छिमेकी कसैले पनि उनको घर भाडामा नलगाएको बताए । पछि बयानका क्रममा उनीसँग भाडामा बस्नेहरूको नामावली र सम्पर्क नम्बर मागियो । उनले खुलाउन सकेनन् ।
उपसचिव बस्नेतले आफ्नो आर्जनलाई विविध क्षेत्रमा लगाउन गरेको व्यवस्थापन अनौठो छ । श्रीमती गौलीको नाममा मोरङ विराटनगरमा दुई कित्ता जग्गा किनेका उनले काकीसँग मिलेर मोरङको केरौनीमा अरू दुई कित्ता जग्गा जोडेको खुलेको छ । आफ्नै नाममा खरिद गर्दा शंका हुने भएकाले जेठानको नाममा जग्गा खरिद गरेर ‘बकसपत्र’ गराउँथे । उनले ०६१ असोज १४ गते जेठान नवीन गौलीको नाममा १२ लाखमा जग्गा किने अनि ०६४ चैतमा जेठानले सविता गौलीको नाममा बकस पास गरिदिए । उनले आफ्नी श्रीमतीलाई उक्त जग्गा ‘जेठानले बकस दिएको’ बताउँथे । खासमा त्यो जग्गा बस्नेत आफैंले किनेर जेठान नवीनको नाममा राखेको खुल्यो । काठमाडौंमा अर्को जग्गासमेत किनेका उनले ०६५ सालमा घर बनाए । घर बनाउदा ६९ लाख ३५ हजार खर्च लाग्यो । विराटनगरमा १३ लाखमा घर बनाए । घरमा मात्रै ८२ लाख ८५ हजार खर्च गरे । गत वर्ष छोरी कृष्टिनाको नाममा गाडी किनेका थिए । जसको मूल्य २० लाख रुपैयाँ देखाइएको छ ।